Ukutshaja ngaphandle kwamacingo ...
Le yimaski yokufudumeza graphene. Le mveliso ikakhulu kukususa ukudinwa kwamehlo kunye nokukhuthaza ukujikeleza kwegazi. Ukufudumeza kusetyenziswa izinto zegraphene. Xa izixhobo ze-graphene zifudunyezwa, zinokukhulula amaza e-infrared, anokukhuthaza igazi lomntu. Ukujikeleza, phelisa ukudinwa kwamehlo. Le mveliso isebenzisa izifudumezi ze-graphene zokutyabeka, ezizezona zinto ziphambili zokufudumeza izixhobo, eziveliswe yinkampani yethu, kwaye inkampani yethu ineqela elitsha lophando lwezinto zophando kunye neqela lophuhliso elitshintshe ...
Kwideskithophu yakho ecocekileyo, iphedi entle yemouse, ngaxeshanye ibambe ipeni kunye nefowuni ephathekayo, ngaba kukho ukuziva komlingo? Ewe, indawo yokugcina kunye nenxalenye yepats yemouse inokuhlulwa ngokuthanda, kwaye inokusetyenziswa Hlela iphepha kunye namatyala. Ulibale ukukuxelela owona msebenzi ubaluleke ngakumbi, siselfowuni engenazingcingo engenazingcingo, ukuba nje uyifaka kwifowuni inokuhlawuliswa nangaliphi na ixesha, emva koko mandazise le nto intsha ngokweenkcukacha: 1. Yimpuku yesikhumba. pad, le mveliso ...
Le mveliso incinci ngobukhulu, inemisebenzi emininzi, iqulethe izinto ze-elektroniki, kunye nefowuni ephathwayo kunye nokutshaja ngaphandle kwamacingo, isibane kunye neminye imisebenzi, efanelekileyo kwimisebenzi yokuthengisa okanye izipho zeKrisimesi imisebenzi ephambili. Umsebenzi wokugcina, kubandakanya zonke iintambo zokubiza kwimarike 3. Isiphatho sefowuni esiphathwayo 4. Umsebenzi wokukhanyisa iModeli No.
Imodeli yenombolo SD003 Iziphumo 10W / 7.5W / 5W Igalelo 9V / 21.5A / 5V 2A umnini wefowuni ephathekayo ewe Ukutshaja ngefowuni ngefowuni, ii-earphone, iiwotshi ezifanelekileyo, Iindlela zokuprinta zeGrafiki G yoshicilelo lokushicilela, ukuprinta i-UV Ukusetyenziswa kwemiSebenzi yokuPhakamisa, uQeqesho kunye neZakhiwo zeQela, iZipho eziMkelekileyo, uBuyela eSikolweni / ukuthweswa izidanga, iZipho eziNtsha zoShishino, iZipho eziNikezelweyo, "Enkosi" Izipho, Ezinye izinto zokwenza izinto zePU Brand Sheerfond Logo Printing: ...
Imodeli No. I-Sheerfond Logo Printa: Uyilo oluCwangcisiweyo loyilo oluCwangcisiweyo lweeMpawu zoMveliso Ubungakanani beMveliso esiyi-228mm * 170mm * 30mm yobunzima bemveliso engama-450g ...
Iiparamitha zemveliso zezi zilandelayo: Imodeli yenombolo ye-GS002 yeemveliso eziBhalwayo incwadana, ikomityi yamanzi efanelekileyo, iadaptha ephathekayo, ukutshaja intambo yokufaka i-9V1.5A / 5V2A yemisebenzi yamanqaku incwadana: 4000mAh / 5000mAh / 6000mAh / 8000mAh ,, Igalelo: 5V 2A, imveliso I-5V2A, itshaja engenazingcingo: 5V1A 5W Ukutshaja ngaphandle kwamacingo i-Gr10W / 7.5W / 5W imeko yesicelo P Ukunikezelwa kweshishini, izipho zokuzalwa, usuku lotata, usuku lomama, izipho zombulelo, izipho ze-VIP, izipho zentengiso, izipho zenkomfa ...